ကြက်သီးထဖွယ်ရာရှုခင်းတွေနဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးမိုးမျှော်တိုက်ကြီး ၇ ခုအကြောင်း - TheeSayChin
ကြက်သီးထဖွယ်ရာရှုခင်းတွေနဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးမိုးမျှော်တိုက်ကြီး ၇ ခုအကြောင်း
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတိုးတက်လားမတိုးတက်ဘူးလားဆိုတာ အမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်လို့ရနိုင်တဲ့အရာတွေထဲ မိုးမျှော်တိုက်တွေပါဝင်လို့နေပါတယ်။ ပေပေါင်းဆယ်ချီရာချီမြင့်မားကြတဲ့ မိုးမျှော်တိုက်ကြီးတွေပေါ်က မြင်ရတဲ့ ရှုခင်းတွေဟာဆိုရင်လည်း လေတဖြူးဖြူးတိုက်နေတဲ့ကြားက ကြက်သီးထစေမှာအမှန်ပါပဲ။ ကမ္ဘာအနှံ့က ခရီးသွားတွေကို ဆွဲဆောင်နေတဲ့ အမြင့်ဆုံးမိုးမျှော်တိုက်ကြီးတွေအကြောင်း Insider မှာ တွေ့မိတဲ့အတွက် ပြန်လည်ကိုးကားမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) Vincom Landmark 81 tower
ဟိုချီမင်းမှာရှိတဲ့ မိုးမျှော်တိုက်ကြီးကတော့ ဗီယက်နမ်မှာ အမြင့်ဆုံးလို့ The Skyscraper Center က သတ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ပေပေါင်း ၁၅၄၀ မြင့်ပြီး အထဲမှာဆိုရင်တော့ ကြယ်ငါးပွင့်စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေ၊ ဇိမ်ခံဟိုတယ်ကြီးတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံတွေအပြင် စကိတ်ကွင်းတွေတောင် ထည့်သွင်းထားပါတယ်တဲ့။
(၂) New York, 111 West 57th Street
ဒီမိုးမျှော်တိုက်ကတော့ နယူးယောက်တစ်မြို့လုံးမှာ အကြီးဆုံးတော့မဟုတ်ပေမယ့် ကမ္ဘာ့ဧရိယာအသေးဆုံးမိုးမျှော်တိုက်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကိုအပိုင်သိမ်းထားခဲ့တာပါ။ ပြောရရင်ကမ္ဘာ့အပိန်ဆုံး မိုးမျှော်တိုက်လေးပေါ့။ နယူးယောက်ရဲ့ 111 West 57th လမ်းမှာတည်ရှိပြီး Central Park ရဲ့ အပေါ်စီးရှုခင်းတွေကို တဝကြီး ခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
A post shared by 111 West 57th St. (@111w57) on Nov 4, 2016 at 10:38pm PDT
(၃) Liebian International Building
Liebian International Plaza လို့လည်း လူသိများတဲ့ မိုးမျှော်တိုက်ကြီးကတော့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ Guizhou အနောက်တောင်ပိုင်း Gyuyang မှာ တည်ရှိနေပါတယ်။ ဟိုတယ်တွေ၊ ရုံးခန်းတွေအပြင် ဈေးဝယ်စင်တာကြီးပါ ထည့်သွင်းထားတာဖြစ်လို့ အဲဒီဒေသကလူတွေအတွက်တော့ အားကိုးလောက်စရာပါပဲ။ ဒီအပြင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လူလုပ်ရေတံခွန်အတုဟာဆိုရင်လည်း ဒီအဆောက်အဦရဲ့ ရှေ့မျက်နှာစာမှာ ထည့်သွင်းဖန်တီးထားပါသေးတယ်။ ရေတံခွန်တောင် ပေ ၃၅၀ ရှိတယ်ဆိုတော့ အဆောက်အဦရဲ့အမြင့်ကို စဉ်းစားသာကြည့်ပါတော့။
READသြစတေးလျနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကြုံတွေ့ရမယ့် ထူးထူးခြားခြား အချက်များ
A waterfall in the middle of the city? There’s one in Guizhou, China. What some people mistook foramassive leak is actually an artificial waterfall on the facade of Liebian International Building in Guiyang, the capital of Guizhou. The water feature stands 350 ft high on the side of the 397 ft skyscraper. It has met criticism among locals who think running the waterfall isawaste of electricity as it costs $118 an hour to power the waterfall’s four pumps. In its defense, the building claims that the waterfall will only run on special occasions and use recycled water. —AFP
A post shared by INQUIRER PROPERTY (@inquirerproperty) on Jul 29, 2018 at 11:43pm PDT
(၄) The Vessel
READသုဿန်အလား ခြောက်ကပ်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ တောင်ကိုရီးယားမှ အပန်းဖြေဥယျာဉ်ကြီး
ပျားလပို့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုး ဒီဇိုင်းထွင်ဖန်တီးထားတဲ့ The Vessel ကတော့ ဗြိတိသျှဗိသုကာပညာရှင် Thomas Heatherwick ရဲ့ လက်ရာကြီးပါ။ Hudson မြစ်ကမ်းနဘေးမှာ တည်ရှိတာကြောင့် တခြားနေရာတွေထက် လေတိုက်တာကို ပိုခံစားရမှာဖြစ်ပြီး အမြင့်ပေကတော့ ၁ပ ၁၅၀ ရှိပါတယ်။
(၅) Umeda Sky Building
ဂျပန်က Umeda Sky မိုးမျှော်တိုက်မှာတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်းလုပ်နိုင်မယ့် အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ စက်လှကားစီးတာပါပဲ။ မှန်တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဓာတ်လှေကားဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် အသည်းတယားယားနဲ့ခံစားရမှာပါ။ လာလည်သူတွေကိုတော့ အပေါ်ဆုံးထပ်မှာရှိတဲ့ ပန်းခြံမှာ မြို့ရှုခင်းတွေကြည့်ဖို့ ပြုလုပ်ပေးထားပြီး အဲဒီပန်းခြံကို floating garden လို့တောင် တင်စားထားသတဲ့။
Benny Marty/Shutterstock Lukasz Palka/Shutterstock
(၆) The Marina Bay Sands Hotel
စင်္ကာပူက infinity pool ရှိတဲ့ ဒီအဆောက်အဦကိုတော့ လူတော်တော်များများ ရင်းနှီးကြမှာပါနော်။ အမြင့်ပေ ၆၃၆ ပေရှိပြီး ဟိုတယ်အပြင် ဈေးကြီးပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ ဈေးဝယ်စင်တာနဲ့ spa တွေကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
Vichy Deal/Shutterstock Mila Larson/Shutterstock
(၇) Infinity London
ဒါကတော့ အခုအချိန်အထိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေတောင်မစရသေးတဲ့ အဆောက်အဦတစ်ခုပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း သူ့ရဲ့ 3-D ပုံကြမ်းနဲ့တင်ကို တော်တော်လေးမိုက်နေတယ်လို့ ခံစားမိတဲ့အတွက် ထည့်ပေးလိုက်တာပါ။ ဆောက်လုပ်ရေးစတင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပြီး အစီအစဉ်အတိုင်းသာဖြစ်မယ်ဆိုင်တော့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ စပါလိမ့်မယ်။ ဒီမိုးမျှော်တိုက်မှာ အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးကတော့ တိုက်ကြီးရဲ့အပေါ်ဆုံးက ရေကူးကန်ပါပဲ။ အထပ်ပေါင်း ၅၅ ထပ်ပါဝင်အောင် လန်ဒန်မြို့လည်ခေါင်မှာ တည်ဆောက်ဖို့ အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားခဲ့ပါတယ်။
နိုငျငံတဈနိုငျငံတိုးတကျလားမတိုးတကျဘူးလားဆိုတာ အမွငျနဲ့ဆုံးဖွတျလို့ရနိုငျတဲ့အရာတှထေဲ မိုးမြှျောတိုကျတှပေါဝငျလို့နပေါတယျ။ ပပေေါငျးဆယျခြီရာခြီမွငျ့မားကွတဲ့ မိုးမြှျောတိုကျကွီးတှပေျေါက မွငျရတဲ့ ရှုခငျးတှဟောဆိုရငျလညျး လတေဖွူးဖွူးတိုကျနတေဲ့ကွားက ကွကျသီးထစမှောအမှနျပါပဲ။ ကမ်ဘာအနှံ့က ခရီးသှားတှကေို ဆှဲဆောငျနတေဲ့ အမွငျ့ဆုံးမိုးမြှျောတိုကျကွီးတှအေကွောငျး Insider မှာ တှမေိ့တဲ့အတှကျ ပွနျလညျကိုးကားမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
ဟိုခြီမငျးမှာရှိတဲ့ မိုးမြှျောတိုကျကွီးကတော့ ဗီယကျနမျမှာ အမွငျ့ဆုံးလို့ The Skyscraper Center က သတျမှတျထားခဲ့ပါတယျ။ ပပေေါငျး ၁၅၄၀ မွငျ့ပွီး အထဲမှာဆိုရငျတော့ ကွယျငါးပှငျ့စားသောကျဆိုငျကွီးတှေ၊ ဇိမျခံဟိုတယျကွီးတှနေဲ့ ရုပျရှငျရုံတှအေပွငျ စကိတျကှငျးတှတေောငျ ထညျ့သှငျးထားပါတယျတဲ့။
ဒီမိုးမြှျောတိုကျကတော့ နယူးယောကျတဈမွို့လုံးမှာ အကွီးဆုံးတော့မဟုတျပမေယျ့ ကမ်ဘာ့ဧရိယာအသေးဆုံးမိုးမြှျောတိုကျဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျကိုအပိုငျသိမျးထားခဲ့တာပါ။ ပွောရရငျကမ်ဘာ့အပိနျဆုံး မိုးမြှျောတိုကျလေးပေါ့။ နယူးယောကျရဲ့ 111 West 57th လမျးမှာတညျရှိပွီး Central Park ရဲ့ အပျေါစီးရှုခငျးတှကေို တဝကွီး ခံစားရမှာပဲဖွဈပါတယျ။
Liebian International Plaza လို့လညျး လူသိမြားတဲ့ မိုးမြှျောတိုကျကွီးကတော့ တရုတျနိုငျငံရဲ့ Guizhou အနောကျတောငျပိုငျး Gyuyang မှာ တညျရှိနပေါတယျ။ ဟိုတယျတှေ၊ ရုံးခနျးတှအေပွငျ ဈေးဝယျစငျတာကွီးပါ ထညျ့သှငျးထားတာဖွဈလို့ အဲဒီဒသေကလူတှအေတှကျတော့ အားကိုးလောကျစရာပါပဲ။ ဒီအပွငျ ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး လူလုပျရတေံခှနျအတုဟာဆိုရငျလညျး ဒီအဆောကျအဦရဲ့ ရှမေ့ကျြနှာစာမှာ ထညျ့သှငျးဖနျတီးထားပါသေးတယျ။ ရတေံခှနျတောငျ ပေ ၃၅၀ ရှိတယျဆိုတော့ အဆောကျအဦရဲ့အမွငျ့ကို စဉျးစားသာကွညျ့ပါတော့။
READသွစတေးလနြဲ့ ပတျသကျလို့ ကွုံတှရေ့မယျ့ ထူးထူးခွားခွား အခကျြမြား
READသုဿနျအလား ခွောကျကပျတိတျဆိတျနတေဲ့ တောငျကိုရီးယားမှ အပနျးဖွဥေယြာဉျကွီး
ပြားလပို့ပုံသဏ်ဍာနျမြိုး ဒီဇိုငျးထှငျဖနျတီးထားတဲ့ The Vessel ကတော့ ဗွိတိသြှဗိသုကာပညာရှငျ Thomas Heatherwick ရဲ့ လကျရာကွီးပါ။ Hudson မွဈကမျးနဘေးမှာ တညျရှိတာကွောငျ့ တခွားနရောတှထေကျ လတေိုကျတာကို ပိုခံစားရမှာဖွဈပွီး အမွငျ့ပကေတော့ ၁ပ ၁၅၀ ရှိပါတယျ။
ဂပြနျက Umeda Sky မိုးမြှျောတိုကျမှာတော့ ထူးထူးဆနျးဆနျးလုပျနိုငျမယျ့ အရာတဈခုရှိပါတယျ။ ဒါကတော့ စကျလှကားစီးတာပါပဲ။ မှနျတှနေဲ့ပွုလုပျထားတဲ့ ဓာတျလှကေားဖွဈတာကွောငျ့ ဘယျနရောကွညျ့ကွညျ့ အသညျးတယားယားနဲ့ခံစားရမှာပါ။ လာလညျသူတှကေိုတော့ အပျေါဆုံးထပျမှာရှိတဲ့ ပနျးခွံမှာ မွို့ရှုခငျးတှကွေညျ့ဖို့ ပွုလုပျပေးထားပွီး အဲဒီပနျးခွံကို floating garden လို့တောငျ တငျစားထားသတဲ့။
စင်ျကာပူက infinity pool ရှိတဲ့ ဒီအဆောကျအဦကိုတော့ လူတျောတျောမြားမြား ရငျးနှီးကွမှာပါနျော။ အမွငျ့ပေ ၆၃၆ ပရှေိပွီး ဟိုတယျအပွငျ ဈေးကွီးပစ်စညျးတှရေောငျးတဲ့ ဈေးဝယျစငျတာနဲ့ spa တှကေို ထညျ့သှငျးပေးထားပါတယျ။
ဒါကတော့ အခုအခြိနျအထိ ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးတှတေောငျမစရသေးတဲ့ အဆောကျအဦတဈခုပါ။ ဒါပမေဲ့လညျး သူ့ရဲ့ 3-D ပုံကွမျးနဲ့တငျကို တျောတျောလေးမိုကျနတေယျလို့ ခံစားမိတဲ့အတှကျ ထညျ့ပေးလိုကျတာပါ။ ဆောကျလုပျရေးစတငျဖို့ ပွငျဆငျနပွေီဖွဈပွီး အစီအစဉျအတိုငျးသာဖွဈမယျဆိုငျတော့ ၂၀၂၀ ခုနှဈမှာ စပါလိမျ့မယျ။ ဒီမိုးမြှျောတိုကျမှာ အဆှဲဆောငျနိုငျဆုံးကတော့ တိုကျကွီးရဲ့အပျေါဆုံးက ရကေူးကနျပါပဲ။ အထပျပေါငျး ၅၅ ထပျပါဝငျအောငျ လနျဒနျမွို့လညျခေါငျမှာ တညျဆောကျဖို့ အစီအစဉျရေးဆှဲထားခဲ့ပါတယျ။
← ခြေသလုံးကြီးသူတွေအတွက် ခြေသလုံးသွယ်လျစေမယ့် အထိရောက်ဆုံး လေ့ကျင့်ခန်း (၆)မျိုး
ဘူဆန်မြို့က ရှုခင်းတွေနဲ့အပြိုင်လှနေတဲ့ ပရိသတ် အချစ်တော် ရွှေကစ် →
Justin Bieber နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ဖို့ လက်ခံတော့မယ်ဆိုတဲ့ Tom Cruise
June 25, 2019 Min Yar Zar 0
များများဆဲလေ အောင်မြင်လေမို့ သည်းခံတယ် ဆိုတဲ့ ဒေးဗစ်ကျော်
June 19, 2019 Min Yar Zar 0
သရဲတကယ်ရှိကြောင်း သက်သေပြနေတဲ့ ကျောချမ်းစရာပုံရိပ်များ
May 24, 2019 Min Yar Zar 0